Ny fampiharana 8 tsara indrindra hizarana fisaka azonao amin'ny findainao | Androidsis
Ny fampiharana 8 tsara indrindra hizarana fisaka azonao amin'ny findainao
Miaraka amin'ny fihazakazahana rehetra tsy maintsy nanofa trano fialan-tsasatra any amin'ireo tanàn-dehibe ny apps, izao dia manana izahay ireo mizara fisaka amin'ny finday. Ary raha mitombo ny isan'ny mpampiasa ireo fampiharana ireo, dia noho ny fahasarotan'ny fanofana trano amin'ny tanàna lehibe iray noho ny halafosany.
Noho izany ianao haneho ny fampiharana tsara indrindra izahay hizarana fisaka miampy ny hafa izay hamela antsika hanofa sofa mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra sy bebe kokoa aza raha mipetraka amin'ny tanàna lehibe ianao; ho an'ny famoahana bitika amin'ny andro manokana. Ataovy.
3 SpareRoom UK
5 C Travelsurfing Travel App
6 Spaces mpiray efitra
8 Efitra Dada: Roomies sy efitrano
Manomboka amin'ny ity fampiharana ity satria noforonin'i Carlos Pierre, ary ny rahalahiny no mpanorina ny Glovo, sy ny fanolorana efitrano amin'ny fisaka ifampizarana. Mila mijery fotsiny ireo vondrona Facebook any amin'ny tanàn-dehibe toa an'i Madrid na i Barcelona ianao rehefa mitady trano fisofana hividianana trano dia hahita efitrano manofa tena maro ianao.
Miorina amin'ny ampifandraiso ny mpanofa sy ny tompon-trano hahafahan'izy ireo miresakaMandritra izany fotoana izany dia mila mamorona profil miaraka amin'ny antsipiriany ianao mba hahafahanao manome fiarovana an'ireo izay hanofa efitrano toy ireo izay mitady azy. Amin'ireto tranga ireto dia tena zava-dehibe ny mombamomba an'i Badi. Fampiharana iray izay misy any Espana sy ny tanàna hafa toa an'i London na Berlin, ka raha mikasa ny handeha hiasa ianao sy ny sisa, io no iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny lisitra.
Manana hevitra an'arivony maro ary efa apetraka be dia be io, koa aza ela ny fanandramana azy satria misy misintona.
Badi - Manofa ny trano fonenanao na ny efitranonao
Tsy toy ny Badi, ity fampiharana ity dia miely bebe kokoa amin'ny firenena 200 mahery sy fiteny 18 samy hafa, noho izany dia lasa ilay tonga lafatra ho an'ireo taranaka vaovao nivoaka hianatra sy mila efitrano izy, satria ny vidiny any amin'ny tanàna sasany dia manakana be toy ny any Madrid na Barcelona.
Mamela anao i Roomter midira amin'ny kaonty Google, Facebook-nao ary bebe kokoa, ary hatramin'ny fotoana voalohany dia afaka mitady mpiray trano na trano ipetrahana ianao. Ary ao anaty rindrambaiko iray izahay miaraka amin'ny antsipiriany hahafahantsika hahafantatra ny fomba fanadiovana, raha misy vahiny matory, raha manao fety ianao, dia fotoana hifohazana hatory, fahazarana mihinana (tsy mihinan-kanina, sns.), raha mpifoka ianao, ora fiasana, asa ary na dia manana biby fiompy aza ianao.
mahaliana ireo lafin-javatra rehetra ireo mba hitarika tsara kokoa ny fitifirana, satria rehefa mizara trano bebe kokoa ny iray, ny iray amin'ireo zavatra kely ireo dia mety hivadika fifandonana mety hitombo rehefa mandeha ny fotoana. Izany no antony fampiharana ny Roomter tanteraka amin'ity lafiny ity.
mpiray efitra, efitra
Miatrika fampiharana izahay hizara fisaka izay faritana ho an'ny Fanjakana Mitambatra ary amin'ny teny anglisy izy io, saingy tsy te-hanilika azy isika, satria firenena misy olona maro mianatra sy manana vanim-potoana tsara. Ka raha any Londres na Manchester ianao, SpareRoom dia fampiharana tena ilaina.
Araka ny voalazan'ny fampiharana mitovy, afaka nanome trano ho an'ny olona maherin'ny 10 tapitrisa ao amin'ilay Fanjakana Tafaray hitady trano na hitady mpanofa te-hizara fisaka. Raha ny marina, ny anarany dia miorina amin'ny fizarana efitrano. Manana kilema ary izy io dia fandoavana vola 15 euro hiseho amin'ny andian-doka ary noho izany dia manana fahitana bebe kokoa ny mombamomba anao.
Handeha amin'ny rindranasa iray izay tena tsy mitovy amin'ny ambiny izahay ary mifandray akaiky koa amin'ny fizarana fisaka. Lazainay izany satria a fampiharana natokana ho an'ny kaonty eo amin'ireo mpanofa samy hafa Mazava kokoa noho izany ny fizarana fisaka.
Ka daholo Kaonty fifandraisana Internet, pizza nozaraina Ary anjaranao ny mandoa, na ny plumber izay tsy maintsy tonga nanamboatra zavatra, dia azo zaraina amin'ny alàlan'ity fampiharana ity izay ananantsika maimaimpoana ao amin'ny Play Store.
Una fampiharana tena manokana hitantanana tsara ny fandaniana ary izany dia tsy miteraka fifandirana ao amin'ny trano iombonambe. Izy io aza dia mamela anao haka sary ny tapakilan'ny fividianana hizara azy ireo mba ho madio ny zava-drehetra.
Misaraka - Kaonty sy fandaniana
C Travelsurfing Travel App
Fampiharana hizarana fisaka, fa tsy fisaka manokana, fa ny seza araky ny fampiharana dia manondro ny anarany, na dia misokatra amin'ny efitrano iray sy ny hafa aza izy io. Dia a Natao ho an'ireo te-hivezivezy sy handalo amin'ireo fampiharana malaza kokoa ny fampiharana toa ny Airbnb ary nahatonga ny vidin'ny hofan-trano amin'ny tanàna maro eran'izao tontolo izao mikorontana.
Andao lazaina ho fampiharana iray ihany koa Io dia hahafahantsika mihaona amin'ny olona hafa firenena rehefa manofa ny satrozinay. Tsy rindranasa manokana ho an'ny mpanofa afaka manana ny habak'izy ireo izy io, saingy ara-tsosialy ary misy karazana rohy mampifandray izay handoa ny sofa anao sy ianao izay manofa izany. Amin'ny Espaniôla ny fampiharana, koa mety tsara ny mampahafantatra antsika karazana tontolo iray hafa izay ahafantarantsika fomba hafa ifaneraserana sy hahazoana alika sasany ho setrin'izany.
Raha mila fomba hafa hitetezana olona ianao ary mivoaka mora vidy kokoa noho ireo Airbnb sy ny hafa izy ireo, mba hanandramana azy; na dia manana ny Safidy handeha hitoby miaraka amin'ireo fampiharana ireo.
Spaces mpiray efitra
Rindrambaiko iray hafa natokana hizarana fisaka, fa mitazona ny fandaniam-bola rehetra sy mifehy azy ireo. Raha tokony hanana bokikely isika dia afaka misafidy ity rindranasa ity izay mamela ny fandoavam-bola eo anelanelan'ny mpanofa hanazava kokoa ny kaonty ary tsy misy olana.
Tsy misy ratsy noho ny tsy fahazoana ny fandoavam-bola isan-kerinandro sy ny fividianana toy ny fitaovana ho an'ny fanadiovana sy ny vokatra vokariny. Ny hany lesoka dia ny tsy amin'ny Espaniôla toa ilay efa noresahintsika tetsy ambony, fa raha any ivelan'i Espana ianao dia mety tsara ho anao ny mifankahazo amin'ny mpiara-mianatra aminao. Maimaimpoana.
RoomMate Spaces - Tandrovy ny fiainanao
Developer: mpiray efitra
Izahay dia teo aloha eny, izany fampiharana mahazatra izany hikarohana sy hanofa fisaka ary manana ny safidinao koa ianao hitady efitrano hizarana, na dia ankapobeny kokoa aza izany toa ny Idealist; ary ny zava-misy fa manana fampiharana manokana kokoa izahay dia hamela anay tsy handalo alohan'ny an'ny Milanuncios sy ireo voalaza etsy ambony.
Habitaclia dia tsy dia fantatra loatra ka mamporisika anao izahay hanandrana Raha toa ka tsy niasa ho anao ny sisa amin'ireo fampiharana, na tianao hanana fahafaha-manao bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fanaovana doka amin'ny toerana maro ianao hahitanao efitrano na hanofa trano iray.
habitaclia - Trano sy trano
Developer: Adevinta Spain, SLU
Efitra Dada: Roomies sy efitrano
Una fampiharana natokana hahitana «Roomies» na izay mitady efitrano na hoe ianao no manofa izany. Izy io dia rindrambaiko misy tranokala iray ary nandalovana efitrano 800.000 mahery, na dia marina aza fa ny fampiharana azy dia tsy misintona loatra miaraka amin'ny hevitra mihoatra ny 8.000.
Dada Room dia manana efitrano avy amin'ny firenena maro sy any Amerika Latina Tsara toerana izy io amin'izay hahitanao mpiray trano aminao. Fampiharana maimaim-poana izay azo ampiasaina hahitana efitrano hofaina.
Roomi: Roomies & Rooms
Developer: Roomi Inc.
Ireo no fampiharana tsara indrindra hahitana fisaka ary hahafahanao ho any an-tanàna hianatra na hiasa. Aza adino ny fanendrena ary andramo izy rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana 8 tsara indrindra hizarana fisaka azonao amin'ny findainao
Spotify dia manavao ny rindrambaiko amin'ny birao miaraka amina endrika vaovao sy fampiasa
Ny lalao hazakazaka 10 tsara indrindra ho an'ny Android